नेपालबहस डटकमको जुम बहस: कांग्रेसले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरोस् - नेपालबहस
नेपालबहस डटकमको जुम बहस: कांग्रेसले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरोस्
| १४:२०:३६ मा प्रकाशित
३ बैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनता छटपटाइरहेका बेला सत्ताधारी पार्टी एमाले भने अर्कै धूनमा व्यस्त छ । जनता सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्, तर सरकार भने तमासे बनेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको सबैभन्दा पुरानो र धेरैले भरोसा गरेको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस त्यसै बस्न मिल्दैन, जनतालाई राहत पुग्ने गरी कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ ।
यही सन्देश दिन हिजो नेपालबहस डटकमले एउटा बहस चलायो । जुम मिटिङमार्फत सहभागी कांग्रेस नेताहरुले यसै पेरिफेरीमा रहेर कांग्रेसको भूमिका र प्रभावकारिताबारे छलफल गरे । “वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका” विषय उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान र पार्टी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले गम्भिर विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । यसरी आफ्ना धारणा राख्नेहरुमा विभिन्न पेशाकर्मीहरुसमेत रहेका थिए ।
ओलीवादको संरक्षणको लागि कोरोना फलिफाप भएको देखियो:- मीन विश्वकर्मा, पूर्वमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा कार्यक्रम भएकोमा धन्यवाद । म आफैं पनि कोरोनाको पीडा भोगेर आएको व्यक्ति हुँ । जसरी कोरोना भइसकेपछि मलाई उकुसमुकुसले सतायो त्यसैगरी अहिले केपी ओलीको नेतृत्वले मुलुकलाई उकुसमुकुस बनाएको छ ।
२०७४ फागुन ३ देखि ओलीले जे जे काम गरेर आए त्यो सबै अलोकतान्त्रिक छ । असंवैधानिक छ । नेपालको अलोकतान्त्रिकरण, ओलीवादको संरक्षणको लागि कोरोना फलिफाप भएको देखियो । त्यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको सुरक्षा मापडण्डको राम्रो उपयोग गर्न पाउने भाग्यमानी पात्र ओली बन्न पुगे ।
पुर्ववक्ता मित्रको कुरा सुन्दा नेपाली कांग्रेसले राजकीय भूमिका र पार्टीको भूमिका अब्बल बनाउन लाग्नु पर्छ । राजकीय भूमिका निभाउन कांग्रेससँग आवश्यक संसद छैन । जसका कारण हामी आज हारेको मानसिकतामा छौं । हामीले चुनाव ताका महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्राई जस्ता मानिसलाई सहयोग गरेका थियौं तर आज त्यो भुमिका ती व्यक्तिहरुबाट कांग्रेसले पायो त ?
नेपाली कांग्रेस संकटमा जन्मिएको पार्टी हो । आफ्नो सम्पति जीउधन भन्ने अवस्था नरहेको बेलामा बनेको यस पार्टीले जनताका पक्षमा धेरै काम गरिरकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रहको आन्दोलन चर्काउनु पर्छ:- डा.डिला संग्रौला, सदस्य प्रतिनिधिसभा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार निकम्मा भएको सबै वक्ताहरुले बताउनु भएको छ । हरेक दिन सयौं मानिस कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । राजनीति बालुवाटार र यसको पेरिफेरिमा भुलिएको छ । कांग्रेसले कोरोनाका बारेमा संसदमा अवगत गराउँदा संसद बन्द गरियो । हुँदाहुँदा तत्कालिन नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण संसद विघटनसम्मका घटना भइसकेका छन् ।
ओली सरकारको बहिर्गमनको बाटो पहिल्याउँदा पहिल्याउँदै ओलीले पुनःस्थापित संसद्मा गएर विश्वासको मत माग्ने काम गरे तर विश्वासको मत पाउन नसकेका ओली पुन अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने र सत्तामा रहने परिस्थिति हामीले भोगीरहेका छौं ।
सरकारले कोभीड बीमा रोकेको छ । सबै अस्पतालमा सहज अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । घरघरमा रहेका विरामीको अवस्था बुझ्ने काम सरकारले गरेको छैन । यसका लागि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वैदेशिक सहायताका लागि सरकारबाट माखो मरेन । त्यसैले नागरिकलाई राहत दिने काममा कांग्रेस लागेको छ । सर्वोच्च बार एशोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत स्वस्थ्य संकटकाल लगाउनु पर्छ भन्ने कुराको कांग्रेसले समर्थन गर्दछ ।
महाधिवेशनको लागि असारदेखि व्यापक तयारी गरिने छ । विकेन्द्रीकरणको नीति बमोजिम निर्वाचन प्रणालीमा हामी जानुपर्छ । हामी अतितमुखी नभएर वर्तमानमुखी कांग्रेस हुनको लागि जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । हामीले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा राख्न सकेका छैनौं । कांग्रेसले दोधारे चरित्र देखाउनु भएन । कांग्रेसका नीति र मार्गचित्र सही र यर्थाथपरक हुनुपर्छ ।
यी उल्लेखित कुरालाई चलाउने एउटा भरोसायुक्त नेतृत्व चाहियो । हिजो चुनावमा कांग्रेसले कम्युनिष्ट आउँदा रुन पाइदैन भनेको कुरा हाँसोको विषय भयो तर वास्तवमै आज जनता रोएर बस्नुपर्दाको अवस्था अत्यन्त पीडादायी छ ।
महाअधिवेशन भनेको नीति, त्यसले लिने निर्णय र आम सदस्यहरुको मनोभावनाको प्रतिनिधित्व पनि हो । (चार सको बयान) पहिलो स भने संसद हो । संसद चर्किन र थर्किन पर्छ । फेरि संसद जान पाएमा हामी त्यो कुरा गर्न सक्छौं । नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रहको आन्दोलन चर्काउनु पर्छ । अहिलेको यस कठिन परिस्थितिमा सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।
ओली कोभीड भन्दा खतरनाक देखिएका छन्:- गुरुराज घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
आज साँच्चै भन्ने हो भने हामी चिन्तित भएर बोल्न नसक्ने अवस्थामा छौ । जनताको अभिभावक बन्नु पर्ने सरकार मुकदर्शक बनेपछि आजको अवस्था हामी भोगिरहेका छौं । कम्बोडियाको झल्को दिने सरकारको गतिविधि देखिएको छ ।
नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मोरिसनको एउटा चर्चित भनाइ छ “यदि तिमी स्वतन्त्र छाैं भने अर्कोलाई पनि स्वतन्त्र बनाउ र यदि तिमी सामर्थवान छौ भने अर्कोलाई पनि सामर्थवान बनाउ ।”
के यो अवस्था अहिले नेपालमा छ त ? पक्कै पनि छैन । कोभीड महामारीमा सरकार गैरजिम्मेवार देखियो । राज्यको अवधारणा जे कामका लागि भएको थियो त्यो कुरा निर्वाह गर्न नसकेपछि सरकारलाई सरकार भनिँदैन । नेपाली कांग्रेस सरकार होइन । तर, पनि सरकारलाई निरन्तर हरेक कुरामा साथ र सहयोग दिँदै आयो ।
प्रतिपक्षको यति राम्रो साथ र सहयोग हुँदा पनि सरकारको नेतृत्वले काम गर्र्र्न सकिरहेको छैन । दुई तिहाई बहुमतको दावी भएको घोषणा गर्ने सरकारले आज आउँदा बहुमत गुमाएर अल्पमतको सरकारको अवस्थामा पुगेको छ । सरकारमा संकट देखियो । प्रधानमन्त्रीको कदमका कारण सत्ता र पार्टी दुवैमा संकट देखियो । संसदीय प्रजातान्त्रिक मान्यतामा सरकारमा संकट देखिएपछि सरकार बनाउने पहिलो प्राथमिकता प्रतिपक्ष दलको हुन्छ । सरकार संकटमा परेपछि सत्ता हातमा लिने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्दथ्यो तर कांग्रेस त्यस कुरामा चुक्यो ।
अर्को कुरा शपथ भनेको कमा फुलिस्टप पनि नबिगारी बाचन गर्ने कुरा हो । के पढ्ने के नपढ्ने भन्ने शपथ लिने मानिसको बशको कुरा होइन ।
महाधिवेशनका विषयमा भन्नुपर्दा सरकारले गरेका नराम्रा काम जनतामा अभिलेखिकरण गरेर भन्नुपर्छ । आज विश्वमा नाङिएको पार्टी सत्तामा छ । यो कांग्रेसको कारणले नै भएको हो । फुटेको एमाले जोडिएर जसपाको साथमा पुनः बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ । यो परिवेशमा कांग्रेस चुप बसेर भोलि जनतामा जाँदा के राम्रो सन्देश जान्छ ?
हामी जिल्ला जिल्लामा मतदान केन्द्र राखेर सबै काम प्रजातान्त्रिक ढंगले सल्टाउँदै तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन गर्न सक्छौं । कोरोना बाहाना मात्रै हो । हामी सुरक्षाको उपाय अपनाएर महाधिवेशन गर्न सक्षम छौं ।
समकालिन नेपालको राजनीति राम्रो बाटोमा छैन । कांग्रेसले प्रजातन्त्रको महत्व बुझाउन सकेन । सत्ताको वरिपरी घुम्ने परिपाटीका कारण कांग्रेसमा २०६४ को नियति दोहोरिन सक्छ । आज वीर अस्पतालमा पुग्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री कसका आदेशमा कता गईरहेको छ ? डाक्टरले विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? यो दुखको विषय हो ।
आज मुलुक राम्रो मान्छेको हातमा छैन । ओली कोभीड भन्दा खतरनाक देखिएका छन् । हिटलर, मुसोलोनी, इदी अमिन, मदुरो जस्ता चरित्र भएका मानिस ओली बनेका छन् ।
सरकार हत्यारा भइसकेको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेकालाई मुद्दा चलाउने हो भने सरकार बाँच्न र भाग्न सक्ने ठाउँ छैन:- रन्जित कर्ण, संविधानसभा सदस्य, पूर्वअध्यक्ष नेविसंघ
कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र स्वस्थ्यलाभ गरिरहनु भएका सबैजनामा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना । कोरानाको पहिलो चरणमा पश्चिमी मुलुकहरु भयावह अवस्थामा पुगे र नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि भारतमा महामारीको रुपमा कोरोना फैलिएको थियो ।
यो समस्या हाम्रो देशमा पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले समयमा ध्यान दिएको र तयारीमा लागेको भए आज हामी यो महामारीमा अक्सिजन नै नपाएर मर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्दैनथ्यो । सरकार भ्याक्सिनमा पनि भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन देखियो । सरकार हत्यारा भइसकेको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेकालाई मुद्दा चलाउने हो भने सरकार बाँच्न र भाग्न सक्ने ठाउँ छैन ।
हामी सरकारको सन्दर्भमा कुरा गरौं, राजनीतिक विषयमा नेपाली कांग्रेसले गरेका काम समाचारका हेडिङ बन्यो तर नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको विषयमा गरेका कामहरु किन समाचारको हेडिङ बनेन ? नेपाली कांग्रेसले अहिलेको सरकारसँग सहकार्य गरेर नागरिकको जीवनरक्षामा लाग्नु पर्ने थियो । भातृ संगठन परिचालन गरेर जो जहाँ थियौं, त्यहीबाट हामीले महामारीका विरुद्ध लाग्नु सक्नु पर्दथ्यो ।
केपी ओलीको विकल्प खोज्ने कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउने हैसियत बनाउन सक्नु पर्दथ्यो तर कांग्रेस चुक्यो । हामीले महन्थ र उपेन्द्रलाई धेरै सहयोग ग¥यौं । तर उनीहरुलाई सहयोग गर्नु आज कांग्रेसका लागि घातकसिद्ध भएको छ । अहिले राजनीति भन्दा पनि आमनागरिकको जनस्वास्थ्य बचाउने विषय प्रमुख हो ।
यो सरकार हत्यारा सरकार हो । राज्यसँग चुनाव गराउने पैसा छ तर कोभीडविरुद्ध लड्ने पैसा छैन ? :- प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
कोभिडका कारणले ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकप्रति श्रद्धासुमन । अहिलेको परिस्थिति अत्यन्त भयावह छ । हामी सबै सचेत भएर दैनिक जीवनयापनमा सहभागी रहौं । नेपालमा कोभिडले ल्याएको यस महामारीमा नेपाली कांग्रेसले कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? भन्ने बारे मेरा केही धारणा राख्न चाहान्छु ।
नेपाली कांग्रेसले कानून त बनाउन सक्दैन । तर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्छ । सरकारले विश्वव्यापी महामारीलाई हेरेर अक्सिजनको मौजदात गर्नुपर्ने हो । तर त्यो भएन । बेलायतमा ६ महिना अघि नै अक्सिजनको हाहाकार भएका समाचार र खबरहरु हामीले सुनेका थियौं । भारतमा नै पनि नेपालमा भन्दा २ महिना अघिदेखि नै अक्सिजनको हाहाकार मच्चिएको थियो । यो कुरालाई विचार गरेर नेपाल सरकारले आवश्यक जोहो र तयारी बेलैमा गरेको भए आजको यस जटिल अवस्था पक्कै पनि आउने थिएन ।
कांग्रेसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै कोभीडमुखी बजेट मागेको होे । सांसद विकास कोष बन्द गर भनेका हौं । सरकारलाई सुझाव दिने मामलामा कांग्रेस कमजोर छैन । अघिल्लो पटक नै “एक परिवार एक पीसीआर”को काम गर्न सरकारलाई भनेको हौं । यो सरकारले समयमा भ्यक्सिन ल्याउनै सकेन । सरकार संचालकले नै भ्याक्सिनमा कमिशन खोजेको समाचारहरु आए । यो सरकार हत्यारा सरकार हो । राज्यसँग चुनाव गराउने पैसा छ । तर कोभीडविरुद्ध लड्ने पैसा छैन ? सरकारसँग पैसा नभएको हैन, इच्छाशक्ति नभएर कोरोना रोकथामको काम नगरेको हो ।
सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ । दवाव दिनको लागि नाराजुलुस नै गर्नुपर्छ भनेको होइन । दवाव दिने धेरै शैलीहरु हुन सक्छन् । कांग्रेससँग आबद्ध विभिन्न भातृ संघ, संगठन, डाक्टरहरु कोभीड विरुद्ध लाग्न सक्छौं ।
अहिले नेपालको राजनीति अति नै लथालिङ्ग भएको छ । अहिले सरकारमा जाने कांग्रेसको चाहना होइन । तर, केपी ओली नेतृत्वको विकल्प कांग्रेसले खोजेको हो । ओलीविरुद्ध संगठित हुने कुरामा हामीले सांगठनिक निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताले नै सो कदम उठाएका हौं । केपीको नेतृत्वमा चुनाव भएमा निर्वाचनमाथि नै शंका गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालको प्रशासनिक संरचनाबारे हामी जानकार छौं, सोही कारण चुनाव निष्पक्ष हुँदैन ।
लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस तयार छ । महामारीकै समयमा हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण आगामी भदौ १९ भित्र कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नु नै पर्छ । समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि वडादेखि केन्द्रसम्मका समितिहरु लाग्नु नै पर्छ । अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा ७ लाख ५० हजार क्रियाशील सदस्यहरुको इन्ट्री भएको छ । अझै डेढलाख भन्दा धेरैको नाम इन्ट्री गर्न बाँकी छ । अहिले सार्वजनिक भएका ४० प्रतिशत मात्रै क्रियाशील सदस्य हुन् । बाँकी ६० प्रतिशतको सदस्यता सार्वजनिक हुनु नै बाँकी छ ।
महाधिवेशन बिना कांग्रेसको भविष्य जोखिममा छ । विचार, संगठनको संरचना लगायत हाम्रो मनोविज्ञान र आन्तरिक लोकतन्त्रमा समेत हामी अद्यावधिक हुन जरुरी छ । मलगायतको टोली कोरोना महामारीको यस घडीमा आइसोलेशन स्थापना र राहत स्वरुप स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने काममा सक्रिय रुपमा लागेका छौं ।
महाधिवेशनका कारण कतै पार्टी नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ:- राजेन्द्र गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य, काठमाडौं–१
सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका कोरोना रोकथाममा देखिएन । न त कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका देखिएको छ न त प्रतिपक्षको नै देखिएको छ । तर सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दल सत्ता राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भएको देखियो ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको भूमिका २१ औं शताव्दीमा आइपुग्दा कतै पार्टी नै हराउने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । लामो इतिहासको जगमा उभिएको पार्टी महाधिवेशनको कारण नै हराउने त होइन भन्ने डर सिर्जना भएको छ ।
अरु पार्टीमा हरेक कार्यकर्ताको लगानी र माया जोडिएको हुन्छ । हामी कहाँ लेबी उठाउने परम्परा नभएकाले पार्टीको माया गर्नेहरुको कमी भो ।
नागरिकको पक्षमा काम गर्न कांग्रेसलाई सत्ता चाहिंदैन:- शिव भट्टराई, वरिष्ठ पत्रकार , गोरखापत्र दैनिक
कांग्रेसले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । इतिहासको कठीन मोडमा कांग्रेसीजन छन् । सरकारले राज्यको सबै संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर जनतालाई कसरी राहत दिने भन्दा पनि आफ्नो गुट र मान्छेको पक्ष पोषणमा सरकार लागेको छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई अहिले अनावश्यक विवादमा तान्ने काम गरियो । अहिले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्ने बेलै थिएन । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो गरे । विश्वासको मत लिन कसैले कर गरेको थिएन । नागरिक उपचार नपाएर छटपटाइरहेका बेला संसद्लाई अनावश्यक रुपमा इञ्गेज गर्ने काम गरियो । एकातिर समस्या र अर्कोतिर राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने काम ओलीले गरे । ओली गुटका कारण देशमा आईपरेको राजनीतिक संकट टार्ने काममा कांग्रेसले अग्रसरता लिनैपर्ने बाध्यता थियो । तर सत्ताको खेल त फेरि पनि ओलीले नै खेले ।
एमालेको आन्तरिक समास्या समाधानका लागि भन्दै ओलीले आज फेरि १० सदस्य कार्यदल बनाएका छन् । यो ओलीको नक्कली कुरा हो । पञ्चायतको कालखण्डमा कांग्रेस सरकारमा नभएता पनि बीपी, गणेशमान ,किसुनजी, गिरिजाबाबुले बोल्दा देशमा नै तरंग ल्याइदिन्थ्यो । नागरिकको पक्षमा काम गर्न कांग्रेसलाई सत्ता चाहिंदैन भन्ने त्यो उदाहरण मात्र हो । त्यो भूमिकामा कांग्रेस फेरि देखिनुपरेको छ ।
अहिले जनतालाई राहत चाहिएको छ । राहतका लागि भूमिका खेल्ने काम आमपत्रकारले गर्नुपर्छ । सञ्चार जगत्सँग सहकार्य गर्दै कांग्रेसले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि समर्पित हुनु आवश्यक छ । कांग्रेसले आफ्ना पार्टी कार्यालयलाई आइसोलेशन बनाउने गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा त भइरहेका छन् , नागरिकसँग जोडिने यो एउटा तरिका हो । यस्तै कांग्रेस नेताले आफ्ना गाडी विरामी बोक्न प्रयोग गर्न दिनेलगायत धेरै राम्रा काम सुरु गरिसकेको छ, त्यसलाई अझ व्यापक बनाइनुपर्छ ।
कांग्रेस मैदानमा नगएर बस्ने हो भने २०५४ को नियति कांग्रेसले भोग्नुपर्ने हुन्छ:- सुवोधकुमार अधिकारी, पूर्व एआईजी, सशस्त्र प्रहरी अधिवक्ता एवं सुरक्षाविद
राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा टाढा रहेर केही समय सुरक्षा कार्यमा रहें । म नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक भएको नाताले भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा राजनीतिमा छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम भइरहेको छ ।
तर, यो परिस्थितिले नेपाली कांग्रेस विक्षिप्त हुने अवस्थामा छैन । नेपाली कांग्रेस यसबेला न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी अपनाएर जनताका माँझमा हुनपर्दथ्यो । तर, खै त ? यस महामारीको बीचमा कांग्रेस मैदानमा नगएर बस्ने हो भने २०५४ को नियति कांग्रेसले भोग्नुपर्ने महशुस मलाई भएको छ । त्यतिखेर बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा स्थानीय चुनाव कसरी भएको थियो ? सबैलाइै ज्ञात भएकै हो ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा हामीले भर्खरै सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको मोडल पनि अपनाउन सक्छौं :- भूपेन्द्रजंग शाही, महासचिव नेपाल तरुण दल, युवा नेता, नेपाली कांग्रेस
अहिलेको परिस्थितिमा कोरोनाले नागरिक आतंकित देखिएका छन् । मृत्युका खबर सामाजिक सञ्जालबाट फैलिँदा म आफै पनि चकित भएको छु । महामारीकै बेलामा पनि हामी हाम्रो दैनिकीलाई राक्दैनौ । यस्तो बेलामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज मिलेर नै महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निभाउने प्रयास स्वरुप कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा नै सरकारी कोषमा ५० लाख जम्मा गरेको थियो । त्यो रकम केमा खर्च भयो ? के कामको लागि प्रयोग भयो ? सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । महामारी नियन्त्रणमा सरकारी कोषमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले अहिलेसम्म कति रकम जम्मा ग¥यो ? त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन ।
हामीले सँधै केपी ओलीको विरोध गरेका छौं । तर गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्ने नागरिक नै नरहने अवस्था अहिले बनिरहेको छ ।
भदौ भित्र नै कांग्रेसको महाधिवेशन सक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामी छौं । सस्तो र चर्को भाषण सबैले सुनेका छौं, तर वास्तविक कुरामा हामी लाग्नु पर्छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा हामीले भर्खरै सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको मोडल पनि अपनाउन सक्छौं ।
जनताले सत्तापक्षलाई मात्र होइन प्रतिपक्षको भुमिकालाई पनि हेरेको हुन्छ । ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि कांग्रेसले खेलेको भूमिका राम्रो छैन । बहुमत सांसद नभएको कांग्रेसले सत्ताको लागि गरेका रोइलो राम्रो होइन । यसले आम कार्यकर्तालाई निरास बनाएको छ । कांग्रेसलाई ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेड जनताले दिएको हो ।
लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भनेको नै चुनाव हो । चुनावमा जान हामी तयार हुनुपर्छ । चुनाव र पैसाको कुनै तर्कसंगत कुरा छैन । पैसा नभएर अहिले सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको होइन । सरकारको नेतृत्व गर्नेले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अहिलेको परिस्थिति खडा भएको हो ।
अहिले कांग्रेसको भूमिका टुक्रिएको एमाले जोड्ने जस्तोमा देखिएको छ :- क्षितिज भण्डारी, युवा नेता, नेपाली कांग्रेस
म मेरो कुरा फिल्डबाट राख्न चाहन्छु । म कोभीडका विषयमा केन्द्रित भएर कुरा राख्छु । म अहिले रहेको क्षेत्रबाट कुरा गरिरहँदा सत्तापक्षका नेता कार्यकर्ताको बाहुल्यता यो क्षेत्रमा धेरै रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको न्युन उपस्थिति रहेका कारण हामी जहाँ जहाँ कमजोर छौं, त्यहाँ त्यहाँ कोभीडका कारण पीडित बन्न परिरहेको नागरिकको संख्या धेरै छ ।
एमाले र माओवादी निकट नेता कार्यकर्ता भएका ठाउँमा मात्रै स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध हुने, बाँकी ठाउँमा नागरिक कोरोनाका कारण अक्सिजन नपाएर मर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य सामग्रीहरु सातै प्रदेशमा समानुपातिक रुपमा बाँडिनु पर्छ । धनगढीमा विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा पैसा उठाएर अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पहिलो कुरा भनेको कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टबाट आम नागरिक बाँच्नु प¥यो । यदि बीपी कोइराला अहिले जीवित भएको भए कांग्रेसलाई कसरी परिचालन गर्थे होलान् ? त्यो बीपीको सन्देश लिएर हामी स्वस्थ्य सामाग्रीसहित गाउँगाउँ र जनजनको घरमा जानु जरुरी छ ।
पहिलो कोरोना महामारीमा पनि हामीले एउटा जुम मिटिङ राखेर त्यस मिटिङको सुझावलाई हामीले अर्थ मन्त्रालय लगायत सरकारको महत्वपूर्ण पदमा रहेका मानिसलाई सुझाव दिएका थियौं । अहिलेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण रुपमा कोरोना नियन्त्रण गर्नतर्फ लागौं । अहिले कांग्रेसको भूमिका टुक्रिएको एमाले जोड्ने जस्तोमा देखिएको छ ।
जनताको जीउज्यान जोगाउन अब स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन :- अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे, सचिव, सर्वोच्च बार एशोशिएसन
हाम्रो मेरुदण्ड नै नेपाली कांग्रेस हो । तपाईंहरुको पुस्ताले नेपाली कांग्रेसले अहिलेको महामारीमा गरेको काम कारबाही के के हो ? र, त्यसबाट के कस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्याे ? यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
मुलुकमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ । कोरोना महामारीमा अक्सिजन नपाएर देशका विभिन्न ठाउँमा धेरैको ज्यान गइरहेको छ ।सरकार गैरजिम्मेवार छ । तर यस्तो बेला कांग्रेस कहाँ छ ? जनताले कांग्रेस खोजेका छन् । यस्तो बेला सरकार बनाउन र भत्काउने खेलमा कांग्रेस लाग्नु राम्रो हो ? यो जुझारु नेतृत्वलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेस बिना न त लोकतन्त्र छ, न त विधिको शासन हुनेछ ।
यही विषयलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च बार एशोशिएसनले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ । अब सरकारले ढिला नगरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । बदनियत राखेर हैन जनताको जीउ ज्यान जोगाउन अब स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन । नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका खातिर स्वास्थ्य संकट घोषणा गर्नैपर्छ । नागरिकको जीवनरक्षाका लागि ओली सरकार भन्दा कांग्रेस कसरी प्रभावकारी भूमिकामा रहन सक्छ ? यो भूमिका कांग्रेसको युवा नेतृत्वबाट निर्वाह होस् भन्ने चाहन्छौं ।
सरकारको बिरुद्ध घरघरबाट थाल ठटाएर बिरोध गर्ने बेला आयाे:- राजेन्द्र सेन्चुरी, द्वन्द्व विशेषज्ञ
नेपाली कांग्रेसले अहिले एक हातमा चारतारे झण्डा र अर्को हातमा स्यानीटाईजर र मास्क लिएर जनताको घरमा जानु पर्दथ्यो । त्यसैगरी निकम्मा सरकारको विरुद्ध कांग्रेस खडा हुन सकेन । धरहरालगायत धेरै विकास निर्माणका काम सकियो भन्दै उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री निस्कनुले कोभीड महामारी बढ्न र नागरिकहरु अन्तिम समयसम्म पनि सुरक्षाका उपाय नअपनाइकन हिँड्ने परिपाटी देखियो ।
सरकारले धेरै निकम्मा कामहरु गरेका कारण नै आज अस्पताल सञ्चालक र डाक्टरहरु निराश देखिएका छन् । हामीसँग अहिले हरेकका हातमा मोवाइल र सामाजिक सञ्जाल छ । यसैको उपयोग गरेर सरकारलाई दवाव दिने गर्न सक्छौं । हरकेका कौशी र छतमा निस्केर सरकारको बिरुद्ध घरघरबाट थाल ठटाएर बिरोध गर्ने बेला आयो
दूरदराजका जिल्लामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन सेन्टर छैन । त्यतातिर नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले ध्यान पु¥राउन जरुरी छ ।सरकारले सस्तो लोकप्रियता र बचाउका भाषण बाहेक केही गर्न सकेको छैन । सरकार विरुद्ध आम कांग्रेस संगठनले बोल्ने बेला आईसकेको छ ।
इन्द्र रिजाल:- प्रधानसम्पादक, नेपालबहस डटकम
आजको भर्चुअल कार्यक्रम उत्साहपूर्वक तवरले समापन भएको छ । यहाँहरुले राख्नुभएका विचारलाई हामी लिपिबद्ध गरेर पुनः नेपालबहस डटकममा प्रकाशन गर्ने छौं ।
सत्ता भन्दा सेवाभावले कांग्रेस मैदानमा ओर्लनुपर्छ:- गणेश केसी:- अधिवक्ता
नेपालबहसले आयोजना गरेको यो जूम मिटिङ वास्तवमा धेरै नै उपयोगी र फलदायी बनेको छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाली कांग्रेसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने सवाल देशका लागि महत्वपूर्ण हो । सत्ता भन्दा सेवाभावले कांग्रेस मैदानमा ओर्लनुपर्छ भन्ने सबैको चिन्ता र चासो देखियो । यसले कांग्रेसलाई नागरिकप्रति समर्पित र सेवाभावमा रहिरहन बल प्रदान गर्ने विश्वास दिलाएको हुनुपर्छ ।
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु १७ मिनेट पहिले
कांग्रेसमा बूढाकै हालीमूहाली ४ घण्टा पहिले
देउवा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफलमा ५ घण्टा पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने ७ मिनेट पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए ८ मिनेट पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने २१ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी २१ मिनेट पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै २४ मिनेट पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी २७ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा ३१ मिनेट पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध ३३ मिनेट पहिले
मेलम्ची–हेलम्बु जोड्ने मोटर बाटो निर्माण जारी ४० मिनेट पहिले
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा बाढीपीडितहरुका लागि राहत सामाग्री हस्तान्तरण ४४ मिनेट पहिले
चीनमा एक दम्पत्तीले तीन बच्चा जन्माउन सक्ने १८ घण्टा पहिले
नासोँमा पहिराेको जोखिम कायमै : अझै पुग्न सकेनन् सुरक्षाकर्मी २ घण्टा पहिले
आज निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ३,४४१ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा २३ घण्टा पहिले
निषेधाज्ञाबीच बेहुला बेहुली मोटरसाइकलमा सरर १९ घण्टा पहिले
बाढीले मनाङको ताल गाउँ डुवानमा ४ दिन पहिले
जबर्जस्ती करणीका फरार प्रतिवादी पक्राउ ५ दिन पहिले
बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न तरुण दलको निर्देशन ४ दिन पहिले
निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न ३ जिल्लाका सीडीओको बैठक बस्दै ७ दिन पहिले
शव व्यवस्थापनका लागि चर्को शुल्क, कोरोना जोखिम त्यत्तिकै ३ हप्ता पहिले
सञ्चालनमा आएनन् कोभिड अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटर २ हप्ता पहिले
लायन्स क्लबद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग १ हप्ता पहिले
कोरोना महामारीमा देवी बनेका स्टाफ नर्स ४ हप्ता पहिले
बाँकेमा थप चार संक्रमितको मृत्यु २ महिना पहिले
बाहिर आईजीपीद्धारा ब्यारेक उद्घाटन, भित्र थुनुवाको आत्महत्या ! १२ महिना पहिले
साउदीमा तीन महिनामा कोमामा पुगेर बाँचेका भुजेलको उद्धार २ महिना पहिले
परीबन्दमा परेर शीतलनिवास गए : प्रचण्ड ११ महिना पहिले